2018 ipad pro vs yekare ipad pro: ndeapi & apos; akasiyana uye iwe unofanirwa kukwidziridza?
Kuru Nhau & Ongororo 2018 iPad Pro vs yekare iPad Pro: ndeapi & apos; akasiyana uye iwe unofanirwa kukwidziridza?
2018 iPad Pro vs yekare iPad Pro: ndeapi & apos; akasiyana uye iwe unofanirwa kukwidziridza?
Sezvatarisirwa, Apple nhasi yatipa akati wandei matsva ePad Pro mamodheru ekudonhedza pamusoro. Ivo & maapos; akanaka, ane simba, uye akazara neanogona, asi ivo & maapos; zvakare ane mutengo uye ... pamwe haisi yekutenga zvine hungwaru kana iwe uine yekare iPad Pro yatove. Kana ivo? Ngatiedzei kuputsa zvinhu pasi uye tione chinoita kuti iyo nyowani iPad Pro ive yakasiyana neiyo yekare Pro Pro uye kana uchinyatsoda kukwidziridza.
Iko & apos; hapana mubvunzo nezvazvo: zvese zvitsva iPad Pro akasiyana anotaridzika akasarudzika. Apple yakagadzira mabhezeri uye yakatenderedza makona ekuratidzira kuti ibudise piritsi iyo inoshamisira kutarisa. Izvo iwe zvaunowana nekuvandudza, zvisinei, iri nani screen-kune-muviri muyero. Kana iwe & apos; uchiuya uchibva kune yekare 9.7- kana 10.5-inch modhi, iwe & apos; iwe uchave uine yakawanda nzvimbo yekuratidzira mukati meiyo imwechete kana diki tsoka. Zvakafanana ndizvo zvinoitika kune avo vanosimudzira kubva kune yekare kuenda kune itsva 12.9-inch musiyano.
Asi mukuita kwekugadzira aya maPads nyowani, mashoma maficha akabairwa. Iyo nyowani 11- uye 12.9-inch iPad Pro haina & apos; haina headphone jack. Apple ichave ichitengesa $ 9 dongle kune avo vanofanirwa kunge vaine analog audio. Bhatani repamba haripo. Panzvimbo iyoyo, iwo mahwendefa akavhurwa neFace ID nepo maUI zvimiro zvakatsiva bhatani repamba & apos; s mabasa.
Chimwe chakakosha tweak kutsiva kweApple & apos; s inobata Lightning port ine yakajairwa USB Type-C chinongedzo. Idzo & nhau dzakaipa kana iwe uchinge uchinge uine boka rezvishongedzo uchivimba neMagetsi chinongedzo kuti ushande, asi nhau dzakanaka dzeindasitiri yacho seyakazara. Iyo USB-C chiteshi pane iyo nyowani iPads ichakubvumidza iwe kuti zvive nyore kubatanidza ivo kune vekunze monitors uye ekuchengetedza michina (ZVIMWE:Zvinotaridza kuti maPads matsva haatsigire ekunze ekuchengetedza maturusi panguva ino). Iwe & apos; uchakwanisa kunyange kuchaja iyo iPhone kana iwe uine USB-C kune Mheni tambo!
Screen yemhando yega haisi & apos; chikonzero chekukwiridzira kune 2018 iPad Pro. Chokwadi, Apple & apos; mapiritsi matsva ane zviratidzo zvinopenya, zvine mavara, uye zvekugadziriswa kwepamusoro, asi ndizvo zvazvaivewo neiyo 10.5-inch modhi kubva gore rapfuura. Ivo vanobva 2015 kana 2016 2016 Pro ichaona musiyano wakakura sezvo ivo & apos; vachizowana iwo mavara akapamhama, otomatiki chena chiyero kugadziridzwa, uye 120Hz kuratidza yekuvandudza mwero - chimiro Apple inodaidza ProMotion.
Unoda Apple Penzura pane yako yazvino Apple Pro? Huye, rombo rakaoma: kana iwe & apos; uchikwidziridza kune 2018 iPad Pro modhi, iwe & apos; uchazoda kutora yechipiri-chizvarwa Apple Penzura futi sezvo iyo yekare isiri kuenderana neiyo nyowani iPad Pro. Asi kukwidziridzwa kunounza mashoma ekugamuchira maficha. Iyo nyowani Apple Penzura inotengesa zvisina waya uye inonamira kudivi reiyo nyowani iPad Pro uchishandisa magineti. Uyezve, unogona kushandura pakati pema brashi nekaviri tap.
Iyo iPad Pro lineup yakagara ichishandiswa neApple & apos; s anonyanya kugona A-akateedzana nharembozha. Pasi pehood yemhando dza2018 tinowana iyo A12X iri, sezvazviri, Apple & apos; ane simba kwazvo zvakadaro. Chokwadi chinofanira kutaurwa, rese iri simba rekugadzirisa rinenge richikunda vashandisi vazhinji, asi avo vanoita yakawanda yevhidhiyo kana yekugadzirisa mifananidzo paPad Pro yavo vanogona kubatsirwa nekukwiridzira kune imwe yazvino mhando dzePad Pro - kunyanya kana izere -fledged vhezheni yeAdobe Photoshop iri kuuya kuiyo iPad muna 2019.
Kwenguva yekutanga munhoroondo, Apple iri kuvhura ipad ine 1TB yekuchengetera mukati. Zvekare, izvi zvinopfuura izvo zvingashandiswa neavhareji mushandisi, asi vashandisi vehunyanzvi vanogona kubatsirwa kubva kune mamwe magigs - sekureba sekugona kwavo kwoumbozha. Neimwe nzira, kune & apos; s base 64GB sarudzo, pamwe neiyo 256 uye 512GB misiyano ichizadza iyo mukaha.
Kamera uye selfies
Kutora mafoto nepiritsi uye kwagara kuri chiitiko chisina musoro chekucherechedza, asi vanhu vanoita kunge vanozviita zvakadaro. Uye mhedzisiro kunze kwe2018 iPad Pro haufanirwe kuora mwoyo: mapiritsi ane 12MP yekugadzirisa uye anogona kupfura 4K vhidhiyo. Pasina kukosha, ivo & maapos ekutanga maPads kutora Smart HDR, iyo inowanikwawo paiyo iPhone XS uye XR.
Uye kumberi, iyo TrueDepth kamera (inoshandiswa kuFace ID) inogonesa akati wandei madhiri. Iwo maPads maviri matsva ndiwo mahwendefa ekutanga eApple kuwana Animoji, Memoji, uye selfie portraits - yakachena kana iwe & apos; dzokera mune izvo.
Bhatiri uye kuchaja
Hupenyu hwebhatiri pane iyo nyowani iPads inofanira kufananidzwa neiyo pane ekare mamodheru, neApple ichivimbisa'anosvika maawa gumi ekutsvaga webhu paWi ‑ Fi, kutarisa vhidhiyo, kana kuteerera mimhanzi.'Kutsvaga pawebhu iwe uri parunhare mbozha kunotapudza fungidziro kusvika kumaawa gumi nepfumbamwe.
Chii & apos; s inotonhorera ndechekuti iyo nyowani iPads inogona kuzobhadharisa nekukurumidza. Izvo & maapos nekuti ivo & maapos; akaunganidzwa aine 18-watt madziro adapta iyo ine simba rakanyanya kusimba kupfuura iyo 12-watt zvidhinha zvakauya nemhando dzekare. Uye sezvo maPads matsva aine USB Type-C yekuchaja chiteshi pachinzvimbo cheMheni, iwe & apos; uchakwanisa kuvachaja neakafanana adapta inosanganisirwa neazvino MacBook malaptop.
Izvi zvingangodaro zvakakunda & apos; zvinouya zvakanyanya sekushamisika. Kutanga pa $ 799 - uyezve imwe $ 129 kana iwe uchida Apple Penzura - 2018 iPad Pro ndiyo chaiyo mari. Chokwadi, icho chidimbu chinotyisa, asi kunze kwekunge uine mari yakawanda inogona kuraswa, kusimudzira kubva gore rapfuura & apos; s iPad Pro ingangove isingazokoshe kune vanhu vazhinji. Asi kana iwe & apos; tichidzoka kubva kuPad ​​Pro ine mamaira akati wandei pamamita - uye kana uchinyatso shandisa izvozvo kuita rimwe basa rakakomba riitwe - saka hongu, mikana iwe & apos; uchakoshesa izvo ichangoburwa iPad Pro.
Pre-odha iyo Samsung Gear Fit 2 Pro muUS uye tora iyo U Flex nharembozha mahara
Maitiro ekuisa Fortnite pane yako Android foni
OnePlus 7/7 Pro uye OnePlus 7T kuwana yavo yekupedzisira Android 10 inogadziridza pamberi peAroid 11 madonhwe
Ungawana sei foni yangu